Track shangu bhaudhi
bhakiti mazino Pin
Hexagon bhaudhi din931
Kuwedzera simbi kudiwa muna Gulf munyika
With pamusoro $ 1 tiririyoni zvemadhenari kwezvivako muzvirongwa vari Mapaipi, hapana zvinoratidza chero kurega munzvimbo yacho kudiwa simbi uye simbi munguva yemberi iri pedyo.
Kutaura zvazviri, kudiwa simbi uye simbi iri GCC nharaunda iri kutarisirwa kuwedzera 31 muzana kusvika mamiriyoni 19.7 matani somugumisiro kwakawedzera kuvakwa zvinoitwa ne 2008, "mashoko akati.
The kudiwa simbi uye simbi zvigadzirwa muna 2005 akamira mamiriyoni 15 matani ane nouchapupu mugove nayo akasangana kuburikidza kupinzwa.
"The GCC nharaunda zvakanaka munzira kwayo pakuva inokosha simbi uye simbi kugadzirwa muzinda kuMiddle East. Muna 2005, ivo GCC States yakanga yashandiswa $ 6,5 billion pamusoro kugadzira simbi uye simbi zvigadzirwa, "maererano nomushumo Gulf Organization for Industrial Consulting (GOIC).
Other kupfuura GCC States vamwe kuMiddle East zvakare yave dzichisangana kuwedzera kudiwa zvokuvakisa, kunyanya simbi.
Maererano Steelworld, magazini kutengeserana muna Asian Simbi Steel kwemauto, yose simbi kugadzirwa kubva January 2006 kusvika November 2006 kuMiddle East akanga mamiriyoni 13.5 matani pamusoro dimikira mamiriyoni 13.4 matani panguva chete rapfuura gore.
Nyika zvakaoma simbi kurimwa gore 2005 akamira mamiriyoni 1129.4 matani apo nokuti nguva kubva January 2006 kusvika November 2006 yaiva kumativi mamiriyoni 1111.8 matani.
"Kuwedzera kudiwa simbi uye simbi uye haizopereri kuwedzera mukurima kwavo uyewo kupinzwa hapana mubvunzo yakanaka chiratidzo nokuda Middle East Iron uye Steel maindasitiri," akadaro DAChandekar, Editor uye CEO pamusoro Steelworld.
"Zvisinei, panguva imwe chete, kufambira kukura rave kwaireva kuti vanoverengeka nyaya chikuru vava zvisingatarisirwi vakatarisana indasitiri pfungwa-varara uye vanofanira kugadziriswa Pandakangowana."
Magazini iri kuronga Gulf Simbi Steel Conference pa Expo dzinyanye Sharjah musi waJanuary 29 uye 30 gore rino.
The Gulf Iron uye Steel Conference ichanyanya dzakasiyana yakaoma nyaya kurutivi kwematunhu Simbi Steel zvekutepfenyura.
The musangano ichaitwa pedyo wechitatu pakadhindwa SteelFab pana Expo Center Sharjah, kuMiddle East guru Kuratidzirwa simbi, fasteners, nenhumbi, kugadzirira pemvura, michina uye maturusi nomoto uye kucheka, kupedza uye kuedzwa zvokushandisa, uye coatings uye Anti-ngura zvinhu.
SteelFab ichaitwa kubva January 29-31 uye ichange iine pamusoro 280 mavanga uye makambani kubva munyika 34. "SteelFab ndiyo nharaunda guru sourcing papuratifomu nokuti simbi kushanda indasitiri," akadaro Saif Al Midfa, mukuru-mukuru, Expo Center Sharjah.
Post nguva: Aug-23-2018
With pamusoro $ 1 tiririyoni zvemadhenari kwezvivako muzvirongwa vari Mapaipi, hapana zviratidzo ...
All-emagetsi jekiseni Kuumbwa muchina kuwana kusimudzirwa zvakanakira pachena
Kana usingazivi chii Google Analytics ndiko, hamuna yakaiswa pamusoro website yako, kana ...